အိပ်နေရင်း သွားကြိတ်တတ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ အကြောင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အိပ်နေရင်း သွားကြိတ်တတ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ အကြောင်း
ဇွန် 10, 2019 Reungwut Ketpupong, D.D.S.
အိပ်နေရင်းသွားကြိတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ သွားဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာ လေးတွေရှိတတ်တဲ့အပြင် ဟောက်လည်း ဟောက်တတ်ပါသေးတယ်။ အဲဒါ အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ် ပိတ်ဆို့ခြင်း obstructive sleep apnea (OSA) ဖြစ်တတ် ပါတယ်တဲ့။
တစ်ချို့ကလေးတွေက အသံတိတ်သွားကြိတ်တတ်တယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ သတိမထားမိလို့ မသိနိုင်တာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သားသားမီးမီးတွေ အိပ်နေတာကို လည်း ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကုထုံးတွေထဲမှာ ပါးစပ်ထဲကိုက်အိပ်ရတဲ့ mouth guard အသုံးပြုတာမျိုးလည်း ပါဝင်နိုင်တာမို့လို့ ဖေဖေမေမေတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေးကို သွားဆရာဝန်နဲ့ သေသေချာချာ ပြသပြီး ရောဂါရှာဖွေမှုနဲ့ ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
သွားကြိတ်တတ်တဲ့ပြဿနာဟာ လူကြီးတွေတင်မက ကလေးတွေမှာလည်း ဖြစ်နေတာပါပဲ။ သွား ဘာလို့ကြိတ်တာလဲဆိုတာ သွားဆရာဝန်တွေတောင် မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတဲ့ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အချက်လေးတွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်း/ စိတ်ခံစားမှုများ – ကလေးတွေမှာလည်း စိုးရိမ်တာတို့၊ စိတ်ဖိစီးတာတို့၊ တစ်ခုခုကို ကြောက်နေတာတို့ ရှိတတ်ပါတယ်။
သွားကြိတ်တဲ့အကျင့်ဟာ မျိုးရိုးနဲ့လည်း နည်းနည်းဆိုင်ပါတယ်။ မိဘ၊ မောင်နှမ၊ မိသားစုဝင်တွေ ထဲမှာ သွားကြိတ်တဲ့အကျင့်ရှိသူ ပါခဲ့ရင် ကလေးမှာလည်း ဒီအကျင့်ပါနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်က နှိုးဆွလှုံ့ဆော်မှုလွန်ကဲနေတာ၊ အာရုံကြောစနစ် အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်နေတာ စတဲ့ ခန္ဓာဗေဒပိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်တတ်ပါတယ်။
ငယ်သွားလဲပြီး ကြီးသွားတွေပေါက်လာတာကြောင့် ပါးစပ်ထဲမှာ ကသိကအောက်ဖြစ်နေတာ၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ကိုက်မိတာတွေ၊ သွားစွယ်တွေ သွားထပ်တွေ၊ စတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါအတွက် သောက်ရတဲ့ဆေးတွေကလည်း အိပ်ရင်းနဲ့ သွားကြိတ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့။ (ဒါမျိုးကတော့ ကလေးတွေထက် လူကြီးတွေမှာ အတွေ့ရများပါတယ်။)
သွားကြိတ်တာတစ်ခုထဲတင်မကဘဲ အိပ်ရာထဲရှူးပေါက်ချတာ၊ ယောင်တတ်တာ၊ အိပ်မက်ယောင်ပြီး လမ်းထလျှောက်တာ စတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကိုလည်းပဲ ကလေးတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ် ပိတ်ဆို့ခြင်း obstructive sleep apnea (OSA) ဖြစ်တတ် ပါတယ် တဲ့။ နောက်ပြီးတော့ အဲဒီလိုကလေးမျိုးတွေမှာ hyperactivity လို့ ခေါ်တဲ့ အတက်ကြွလွန်ရောဂါမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သွားကြိတ်ခြင်း၏ အန္တရာယ်နဲ့ သက်ရောက်မှုများ
သွားတွေ ပွန်းတာကစလို့ ကျိုးသွား ပဲ့သွားတဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သွားကြိတ်ရင်း လျှာကိုက်မိတာတို့၊ ပါးစောင်ကိုက်မိတာတို့ကြောင့်လည်း ပါးစပ်ကြီး နာ နေတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အံကြိတ်နေမိလို့ မေးရိုးတွေသာမက နားတွေပါ နာကျင်နေတတ်ပါတယ်။သွားကြိတ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် အစာစာတဲ့အခါမှာ သွားတွေ ဝါးမကောင်းတာ၊ မကြာခဏ ခေါင်းကိုက် တတ်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ သွားတွေ ပါးပြီး နိမ့်လာတာမို့ သွားရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိခိုက် ပြီး သွားအတွင်းထဲက အာရုံကြောတွေရှိတဲ့ အလွှာအထိ ထိုးဖောက်ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။
ကုထုံးတွေထဲမှာ ပါးစပ်ထဲကိုက်အိပ်ရတဲ့ mouth guard အသုံးပြုတာမျိုးလည်း ပါဝင်နိုင်တာမို့လို့ ဖေဖေမေမေတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေးကို သွားဆရာဝန်နဲ့ သေသေချာချာ ပြသပြီး ရောဂါရှာဖွေမှုနဲ့ ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလေးတွေက အသံတိတ်သွားကြိတ်တတ်တယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ သတိမထားမိလို့ မသိနိုင်တာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သားသားမီးမီးတွေ အိပ်နေတာကို လည်း ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကလေးတွေအနေနဲ့ သွားစိပြီး အံကြိတ်တာမျိုးတွေ မကြာခဏ လုပ်နေတယ်ဆိုရင် သူတို့ အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ အထူး ဂရုစိုက်ပြီး ကြည့်ပေးစေလိုပါတယ်။
ကလေးတွေ သွားကြိတ်တဲ့အရေး ကင်းဝေးစေဖို့ မိသားစုအတွင်း အကောင်းဆုံး အိပ်စက်နည်းတွေ
ကလေးလေးတွေအနေနဲ့ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းထဲမှာ စူးရှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တွေ မရှိဘဲ အိပ်စက်ရပါမှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ပြီး ပြည့်ဝတဲ့ အနားယူမှုကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မအိပ်ခင် ၃ နာရီအတွင်း အစားများများကျွေးတာမျိုးမလုပ်ရပါဘူး။ အဲဒီအစား နို့တိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ခါနီး တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားရတဲ့ အပြုအမူတွေ မပြုလုပ်စေသင့်ပါဘူး။ နို့မို့ဆို မျက်လုံးကျယ်ပြီး မအိပ်ဘဲ နေပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတွေကို ညနေပိုင်း ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်တတ်စေဖို့ သင်ထားပေးရပါမယ်။ အိပ်ရာကို အချိန်မှန် ဝင်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားပေးရပါမယ်။ အိပ်ခါနီး တီဗီကြည့်တာတို့ ဂိမ်းဆော့တာတို့ မလုပ်စေရပါဘူး။ အဲဒါတွေက မလိုအပ်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖြစ်စေပြီး အိပ်ပျော်သွားရင် သွားကြိတ်ပါလေရော။
ကလေးပါးစပ်ထဲ သွားရောက်လာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြသ စစ်ဆေးပါ။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ကိုက်မိတာတွေ၊ သွားစွယ်သွားထပ်တွေရှိနေရင် အကောင်းဆုံးကတော့ မေးရိုး ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး ပြုပြင်ပေးသင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ငယ်သွားလဲအတဲ့အချိန် (၆နှစ်ကျော်လောက်မှာ) အိပ်တဲ့အခါ ပါးစပ်ထဲကိုက်အိပ်ရတဲ့ mouth guard ကလေးနဲ့ ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကြီးသွားတွေ ပုံစံမှန်မှန် ပေါက်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွားကြိတ်တတ်တဲ့အကျင့်ကို ပျောက်သွားအောင် ခုထိ လုပ်မပေးနိုင်သေးတာမို့ မိဘတွေအနေနဲ့ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပြီး လိုအပ်သလို သွားဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး ဆွေးနွေးအဖြေရှာ ကုသပေးသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
အိပ်နေရင်း သွားကြိတ်တတ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ အကြောင်း သွားကြိတ်တတ်တဲ့ပြဿနာဟာ လူကြီးတွေတင်မက ကလေးတွေမှာလည်း ဖြစ်နေတာပါပဲ။ သွား ဘာလို့ကြိတ်တာလဲဆိုတာ သွားဆရာဝန်တွေတောင် မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတဲ့ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အချက်လေးတွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
User rating: 3.07 out of5with 15 ratings
Reungwut Ketpupong, D.D.S.
D.D.S., Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, 2001.
Summary: Pediatric Dentistry Pediatric Dentistry